Sawirro: Madaxweynaha Turkiga oo hab maamuus sare u sameeyay safiirka Somalia - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Madaxweynaha Turkiga oo hab maamuus sare u sameeyay safiirka Somalia
Sawirro: Madaxweynaha Turkiga oo hab maamuus sare u sameeyay safiirka Somalia
Istanbul (Caasimada Online) – Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa shalay ku qaabilay aqalka madaxtooyada Turkiga Safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u fadhin doona dalkaas Amb. Jaamac C/llaahi Maxamed (Jaamac Ceydiid).
Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalka Turkiga Jaamac Ceydiid ayaa si hab maamuus sare loogu soo dhoweeyay Madaxtooyada Turkiga, wuxuuna waraaqahiisa aqoosniga safiirnimo ka guddoomay Recep Tayyib Erdogan oo si wada jir ahna u wada qaabilay mas’uuliyiinta safaaradda Somalia. Jaamac Caydid oo madaxweyne Farmaajo magacaabay ayaa ah ganacsade aan xil dowladeed horay usoo qaban, waxaana hab maamuuskii lagu qaabilay ay dadka diblumaasiyada wax ka yaqaan ay dhaliileen qaabkii uu dhambaalkii ka siday madaxweynaha Somalia iyo aqoonsigiisa u guddoon siiyay oo hareer marsaneyd nidaamka diblumaasiyada. Muuqaalkaan Eeg nidaamka diblumaasiyadeed ee Safiir Jaamac iyo safiirada Tanzania ee laga guddoonay waraqaaha aqoonsiga waxa ay ku kala duwan yihiin.